Amazwe ama-5 asempilweni e-U.S. (Kwaye anganyanzelekanga) - Iindaba | Eyenkanga 2021
Uluntu, Impilo Iindaba Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Iindaba Imidlalo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Iziyobisi Vs. Umhlobo Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi Impilo Ukuzonwabisa Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba
Eyona >> Iindaba >> Isempilweni kangakanani imeko yakho?
Isempilweni kangakanani imeko yakho?
Unyaka nonyaka, iZiko lezeMpilo eManyeneyo libeka inqanaba lesizwe ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo nangokwentlalontle ngokwaseburhulumenteni. Inkqubo ye- Izikhundla zezeMpilo zaseMelika Ingxelo yinkcazo yonyaka yenkqubela phambili (kunye nemiceli mngeni) ekhokela abenzi bomgaqo-nkqubo, amagosa ezempilo oluntu kunye neenkokheli zoluntu. Usebenzisa idatha ebanzi evela kwimithombo ye-19, kwiindidi ezi-5, kunye nemilinganiselo ye-55 yezempilo, ngumgangatho othembekileyo wokuba yeyiphi na indawo esempilweni- kwaye engenampilo- e-United States.
Ngaba uyazibuza ukuba aphi amanqaku ezempilo karhulumente wakho?
Amazwe aphilileyo eMelika
Ngelixa iziphumo kulo lonke elaseMelika lilonke linokubonelela ngokuqonda okubalulekileyo kwimpilo yohlanga ngokubanzi, ingqiqo enkulu inokufunyanwa ngokujonga amazwe ngokwahlukeneyo.
Amazwe aphezulu amahlanu asempilweni ngala:
# 1 iVermont
IVermont inyuse amabala amathathu ukusukela ngonyaka ka-2018 ukuze ibe lelona lizwe lisempilweni e-US ngo-2019. Olu phuculo luqhutywa ikakhulu kukonyuka okubonakalayo (i-24.3% ukuya kuma-36.7%) kwipesenti yabantu abadala abanemfundo engaphantsi kwesikolo esiphakamileyo abaye baxela impilo ephezulu iwonga. Ngamanye amagama, iVermont yenze amanyathelo amakhulu ekunciphiseni ukungafani kwemeko yezempilo kulo nyaka. Urhulumente naye uza ngaphantsi kwe-8.8% kumyinge wesizwe kubahlali abangaqinisekiswanga kwi-4.3%.
Oko kwathethi, kuhlala kukho indawo yokuphucula. Ngokomzekelo, iziganeko zeVermont ze-pertussis (ukukhwehlela) ziphezulu kakhulu kunomyinge wesizwe, zifikelela kuma-17.3 amatyala nge-100,000 xa kuthelekiswa namatyala angama-5.8 kuma-100,000 ngonyaka.
# 2 eMassachusetts
Nangona ukusweleka kweziyobisi eMassachusetts kunyuke iipesenti ezingama-87 kule minyaka mithathu idlulileyo, urhulumente uyigcinile indawo yakhe yesi-2 enkosi ubukhulu becala kukuxhaphaka kokutyeba kunye nokunyusa inkxaso mali yezempilo yoluntu.
# 3 eHawaii
Ukuhla ukusuka kwinqanaba layo le-2018 No. 1, iHawaii isenamanani ezempilo anomdla. Ngokuhambelana kwiintlanu eziphezulu, uninzi lwabemi bayo baqinisekisiwe; kunye, urhulumente unezinga eliphantsi kakhulu lokutyeba kakhulu.
# 4 Ikhonkco
Nangona i-Connecticut ineqondo lokufa kwentliziyo kunye nenani labantu abatshayayo, ukusweleka kweziyobisi kurhulumente kunyuke nge-140% ukusuka kwi-11.0 ukuya kuma-26.4 ukusweleka kwabemi abayi-100,000 kule minyaka mihlanu idlulileyo.
# 5 i-Utah
Ukuma ngokungaguquguqukiyo njengelizwe lesihlanu elisempilweni eMelika, i-Utah ineqondo eliphantsi lokutshaya kweli lizwe nge-9%, kunye nelinye lawona manqanaba aphezulu okuziqhelanisa nomsebenzi womzimba. Kukho igumbi lokuphucula ngokwandisa ukhuseleko lwabantwana, apho bakwinqanaba lama-40 ngoku.
Amazwe angenampilo e-U.S.
Kwelinye icala lesiphelo, kubalulekile ukuqonda ukuba leliphi ilizwe elifuna olona ncedo kwaye lichonge iindawo eziphambili ekufuneka zijolise ekuphuculeni impilo yoluntu lwabo.
Nanga amazwe anelona gumbi likhulu lokuphucula:
# 46 i-Oklahoma
Nangona ukutshaya e-Oklahoma kwehlile ngama-25% ukusukela ngo-2012, urhulumente usenelinye lawona manqanaba aphezulu okutshaya kweli lizwe nge-19.7% yabantu abadala abathathe inxaxheba kulo mkhwa. Urhulumente unenani eliphezulu labantu abangaqinisekiswanga nge-14.2%, xa kuthelekiswa ne-Vermont's 2.8%
# 47 Alabama
Ukunyuka ukusuka kwindawo ye-48th kwi-2018, ukuphuculwa kwepesenti yeAlabama yabafundi bezikolo eziphakamileyo kubonile ukuba abantu bayo babe sempilweni. Oko kwathiwa, kukho indawo yokuphucula ukunciphisa ukwanda kwesifo seswekile kunye nempilo ye-cardiovascular health kwiindawo zaseAlabama.
Ezinxulumene: Amayeza eswekile kunye nonyango
# 48 iArkansas
Njengamazwe amaninzi anegumbi elibalulekileyo lokuphucula, i-Arkansas inezinga eliphezulu lokutyeba kakhulu, kunye nokunyuka kwesifo seswekile (ukuya kuma-24% ukusukela ngo-2012).
# 49 eLouisana
Kwiindaba ezimnandi, inani labahlali baseLouisana abangenayo i-inshurensi yezempilo lehle nge-60% kule minyaka isixhenxe idlulileyo. Oko kwathiwa, ezona ndawo zikhulu zokuphucula amazinga aphezulu okutyeba kakhulu kunye nenqanaba eliphezulu lokufa kwentliziyo. Omnye umba oxhalabisayo kukwanda okukhulu kokusweleka kweziyobisi kule minyaka mihlanu idlulileyo, inyusa i-65% ukusuka kwi-12.9 ukuya kwi-21.3 yokusweleka kubemi be-100,000.
# 50 iMississippi
I-Mississippi ingena emazantsi esimo sikarhulumente ngo-2019, ishiye indawo enye ukusukela ngo-2018. Oku kubangelwa kukufa okuphezulu kweentsana, ukusweleka okungama-8.6 kwinani ngalinye lokuzalwa kwabantu, xa kuthelekiswa nokufa kwabantu abayi-5.8 ngabali-1 000 abazalwayo elizweni, nangaphezulu komndilili. ukuxhaphaka kokutyeba kakhulu (i-39.5% xa kuthelekiswa nenani lesizwe le-30.9%). I-Mississippi ikwabonisa igumbi lokuphuculwa kwempilo yentliziyo yabemi bayo, ukurekhoda inqanaba lokufa okuphezulu kwentliziyo kwi-363.2 yokufa nge-100,000, xa kuthelekiswa nokufa kwe-260.4 kwi-100,000 kuzwelonke
Kwinqaku elihle, amandla kaMississippi aquka ukuba ngaphantsi komyinge wesizwe wokufa kweziyobisi, ngezinga lokufa kwe-12.1 nge-100,000 xa kuthelekiswa nokufa kwe-19.2 kwi-100,000. Ekuvukeni kwesibetho sesizwe se-opioid, ayisiyonto encinci leyo.
Akukho bungakanani-bukhulu-bonke-indlela eya kuphucula impilo yabemi kwinqanaba likarhulumente. Ifuna indlela eyahlukeneyo. Ngokwengxelo, Ukugxila kwinqanaba elinye kuphela akunakuphucula impilo ngokwaneleyo ukutshintsha isikhundla sikarhulumente. Nangona kunjalo, ulwazi olunikiweyo lunokusetyenziselwa ukubeka phambili iinjongo zempilo yoluntu kunye nokuvuselela incoko ebifunekayo malunga nendlela yokuphucula impilo zikarhulumente.
Kuthekani ngoluntu oluphakathi?
Kuhlala kulula ukutsala umdla kubadlali abaphezulu nabasezantsi nakweyiphi na isifundo, kodwa kuthekani ngamazwe aphakathi? Zithini malunga nempilo yaseMelika?
Amazwe anjengeMontana (# 24), iAlaska (# 27), iKansas (# 29), iArizona (# 31), neFlorida (# 33) lonke uncedo lubalaselisa imeko yokufikelela okuphantsi kubanikezeli bezempilo, nokuba ngoogqirha bamazinyo, impilo yengqondo ababoneleli, okanye ogqirha abaziintloko. Njengoko bekuyinto eqhelekileyo kule minyaka idlulileyo, ukufikelela kukhathalelo lwempilo iimfuno zoluntu kubambe impilo yala mazwe. Oku kuboniswa ngakumbi ngamanqanaba aphezulu abahlali abangaqinisekiswanga.
Iqhube njani iMelika iphelele?
Kuninzi ukubhiyozela kwingxelo ye-2019, kunye nokuphuculwa okubonakalayo kwiindawo ezininzi kunyaka ophelileyo. Kwinqanaba likazwelonke, Nazi ezinye zeendlela eziphambili zokuthatha:
Ukutshaya kwehle nge-6%
Phantse i-1,200 embalwa yokufa kweentsana
Abantwana kwintlupheko behle nge-2% ukusuka kwi-2018, kunye ne-20% ukusukela kwincopho yayo ka-2013
Inani lababoneleli ngempilo yengqondo elifuneka kakhulu e-US lonyuke nge-5%
Kwelinye icala, ingxelo ka-2019 ikwaqaqambise iindawo ezixhalabisayo. Ekuchongeni le mimandla, kuyathenjwa ukuba zinokuqwalaselwa kwaye ziphuculwe ukuya phambili:
Ukuzibulala kunyuke nge-4%
Ukonyuka kwama-37% kwinqanaba lokusweleka kweziyobisi, okulingana nokufa okungaphezulu kwama-53,000 kule minyaka mithathu idlulileyo
Ezinxulumene: Indlela oosokhemesti abanokukunceda ngayo ukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi ngugqirha
Kodwa kuthekani ngokuqhubekayo kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo?
Isikhumbuzo seminyaka engama-30, iingcali zishwankathela impumelelo ephambili kunye nobunzima kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo yezempilo yase-U.S.Olu lolona phuculo luphambili lwempilo kwi-US ukusukela ngo-1990:
Ukuhla kwe-45% kukutshaya
Ukwehla ngama-43% okusweleka kweentsana
Ngokubalulekileyo, ingxelo yowama-2019 ikwazile ukuchonga eminye yemiceli mngeni ephambili eye yavela kuluntu lwethu kule minyaka ingama-30 idlulileyo. Ngokufanelekileyo:
I-166% inyuka ekutyebeni kakhulu
I-148% inyuka kwisifo seswekile sabantu abadala ukusukela nge1996, ngoku ichaphazela abantu abadala abazizigidi ezingama-30
I-17% inyuke kwinqanaba lokuzibulala ukusukela ngo-2012
Ukunyuka kwe-104% kukusweleka kweziyobisi ukusukela ngo-2007
Ezinxulumene: Ngaba phentermine ukunciphisa umzimba ekhuselekileyo?
Kwenzeka ntoni ngoku?
Ngokukhutshwa kwengxelo ye-2019, abameli kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo ngoku banokufikelela kwidatha ebalulekileyo ekuncedeni ukwakha uluntu olusempilweni. Iinkokheli kumgangatho wombuso kunye nowesizwe banokusebenzisa iziphumo zeNgxelo yoNyaka, kokubini kunyaka ophelileyo kunye neminyaka engama-30 edlulileyo, ukwenza izisombululo eziqhubeka nokuphucula impilo yesizwe. Umzekelo, ngokonyuka okukhulu kwesifo seswekile sabantu abadala kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, iinkqubo ziyasasazwa kuluntu olujolise ekufundiseni abantu ngendlela abanokusithintela ngayo esi sifo kunye kwisifo seswekile .
I-SingleCare ilapha ukunceda. Ukuba esinye sezigidi zaseMelika ezichaphazelekayo ziimeko ezinje isifo seswekile , isifo sentliziyo , okanye ukutyeba kakhulu , okanye nayiphi na enye imeko yaloo nto, i-SingleCare inokukunceda ufikelele kumaxabiso asezantsi kunyango lwakho. Khangela nje amayeza akho Apha kwaye uqalise ukugcina. Sikwabonelela ngeetoni zolwazi kwibhlog yethu ukukunceda ufunde ngeemeko ezahlukeneyo kunye namayeza, onokuwajonga Apha .
IPhenylephrine vs pseudoephedrine: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Buyintoni ubuninzi obuphuma epokothweni?
I-Flonase vs.Nasonex: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Isikhokelo sakho kwiilekese zeHalloween ezingenanto ye-gluten
Luyintoni uvavanyo lwe-TSH kwaye zithini iziphumo zakho?
I-2 yeeNtsebenzo eziLungileyo zeCyber ​​ngoMvulo kwiAmazon
Ngaba kukhuselekile ukuthatha iTrulicity kunye ne-metformin kunye?
Trulicity vs Victoza: Umahluko ophambili kunye nokufana
Kuthetha ukuthini ukuguqula ama-26 kwimpilo yakho
Yintoni omele uyazi ngaphambi kokutshintsha i-anti-depressants
Amachiza enziwe afana nalawo aveliswe ngumenzi asandula ukufumaneka ngo-2019
Ngaba unengxaki yokulutha kwempumlo? Inyathelo 1: Beka phantsi iAfrin
Eyona pilisi yolawulo lokuzalwa yenzuzo
Ndingathatha isicwangciso b
iviniga kunye nesoda yokubhaka yeenzipho zomngundo
ndingasela xa ndithatha iipakethe z
iswekile yegazi eqhelekileyo emva kwesidlo esingeso seswekile
Ngaba i-lyrica iya kukwenza ukuba usilele kuvavanyo lweziyobisi
Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo
Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi